Ifomu leSodium, Amaprotheni aseMelamine, Amaphethini wePotassium - Pulisi
I-ACID - SALT - SULFIDE
Sibe ngumlingani omuhle ne-SINOPCE / CNPC / Saint-Gobain / BHP.
I-Pulisi is umphakeli emhlabeni jikelele kumakhemikhali akhethekile, Sisungula ku-2006, njengomthengisi omkhulu we-china sodium formula, ikhono ngu-4000MT / ngenyanga,
sinezitshalo ezimbili ezidlulise isitifiketi se-ISO14001 / ISO 9001 / REACH / FAMI-QS / GMP
gxila kwi-R&D, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nokufakwa kwempahla, echwebeni le-qingdao / i-tianjin / i-shanghai kanye neZibo Free Trade Zone zinezindawo zethu zokugcina izimpahla, Inkonzo yokufukula / yokwakha / yesikhumba neyomkhakha yokwelapha amanzi.
sinezisebenzi ezingaphezu kwe-50, sisebenzela amakhasimende angama-600＋ emazweni angama-90＋. Inethiwekhi yethu inwebile kuwo wonke amazwekazi amakhulu nakumazwe amakhulu.
Umsebenzi wethu ukuhlinzeka ngemikhiqizo ephezulu kakhulu yokuthuthukisa umsebenzi wamakhemikhali womhlaba
ISodium Sifomati 92
ICalcium Formate Tech Ibanga
I-calcium calcium formate feed ibanga
Ifomathi ye-Potassium, usawoti we-formic acid, isebenza kahle kakhulu kunamanye ama-de-icing agents afana ne: Potassium acetate Urea Glycerol Qhathaniswa ne-potassium formate, ethathwe ekusebenzeni okuhle kwe-100%, i-potassium acetate ine-80% yama-85% kuphela, kuya ngokushisa okukhona.
Ukushayela ngamandla kagesi nezinto ezingavuthiwe kuyibhizinisi elinzima nelifuna ngenkani. Ama-rigs abizayo, indawo enzima nezimo ezinzima ze-geological zenza kube yinselele futhi kube yingozi. Ukwandisa inzuzo yamasimu ka-oyili negesi, amafomu anikezela ukusebenza okuhle kakhulu nezinzuzo zezemvelo. Ubuchwepheshe bokuqamba bunika amandla ukushisa okuphezulu kokushayela okuphezulu, kunciphisa ukulimala kokubumba, kunciphisa izindleko zokusebenza futhi buthanda imvelo. UPulisi ungumholi womhlaba jikelele ekukhiqizeni amafomathi we-sodium ne-potassium futhi uhlehlela emuva ngokuphelele. Siphatha isitokhwe esanele ukuhambisa noma yisiphi isicelo esingazelelwe futhi sinikezela ngokulethwa okusebenzayo kakhulu zombili ngokuphatha kanye nokuhamba ngezinto ezibonakalayo. Konke ukugcina ama-rigs egijima futhi ugweme ukukhiqizwa kokubiza okubizayo.